Ndụ nke nwanyị nke oge a jupụtara na ndụ kwa ụbọchị na mgbe ụfọdụ, ọbụghị oge iji zuru ike na izu ike n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Otú ọ dị, oge dị otú ahụ ngwa ngwa nwere mmetụta dị njọ na ahụike, yabụ ọ dị mkpa mgbe ụfọdụ iji dozie ụbọchị iwepụta.
Oge magburu onwe ya maka ntụrụndụ nwere ike ịbụ ihe ngosi nke ọdịdị, nakwa na ụbọchị nke a mere ka obi dịkwuo ụtọ, ị nwere ike ijikọ ya na oge foto. Oge ezigbo oge ga-agba gị ụgwọ maka ụbọchị izu ụka na-abịanụ, ihe osise ndị ga-enye gị ga-enye gị ncheta obi ụtọ.
Ngwa maka oge ịse foto "picnic"
Mgbe ị kpebisiri ike ime ebe ahụ, ị ​​ga-eche echiche banyere otu ị na-eme atụmatụ iji ezumike gị. Ọ bụrụ na nke a bụ oge ọkụ, mgbe ahụ i nwere ike ịnọdụ n'ala, na-ehi ụra na blanket ma ọ bụ akwa akwa. Na oge ntanye oyi nke afọ, ọ ka mma iji gị na tebụl na oche ndị ga-eme ka ahụ ruo gị ala.
N'ihi na ịdebe oge ịse foto "picnic", ihe ndị dị mkpa, ma ihe mkpuchi ahụ, bụ: nkata wicker na mkpụrụ osisi, mmanya, champeenu ma ọ bụ ọkụ na tee tii. Mgbe ahụ ịnwere ike ịgbakwunye foto ahụ na ihe ndị na-esonụ. Ọ nwere ike ịbụ ihe ọ bụla, site na bọọlụ, ihe ọkụkụ na ihe mgbochi, na-agwụ na ohiri isi, gramophone, igwe na ụgbọ ala na-agbanye.
Nke mbụ, ọ dị gị mkpa iji echiche ma ọ bụ ihe ederede, nke ga-ewe foto. Na mgbe ahụ, ị ​​ga - ekpebisi ike na nkwado ndị dị mkpa.
Echiche maka ịse foto na picnic
Ọ bụrụ na ịchọrọ imezu atụmatụ niile ahụ, ị ​​nweghị ike ime n'enweghị ezigbo onye na-ese foto. Ihe edere akwadebe ga-enyere gị aka inwe afọ ojuju taa.
N'oge na-adịbeghị anya, foto foto nke otu "picnic" maka ụdị abụọ nke akụkọ ịhụnanya - lava stori - aghọwo ezigbo ewu ewu. A na-emekarị ha n'ehihie agbamakwụkwọ ma ọ bụ n'ụbọchị agbamakwụkwọ. Iji mee nke a, ọ kacha mma ịhọrọ ebe dị jụụ ma zoro ezo, ebe ọ dịghị onye na-egbochi gị idyll. Ya mere, agbamakwụkwọ agbapụta na ụdị "picnic" na ọdịdị, ga-abụ ihe magburu onwe ya ọzọ na foto a ma ama.
Ma ọ bụrụ na ị kpebie ka gị na ndị enyi gị zuru ike, gịnị ma ị ga-eme ndokwa na-emegharị ahụ? Ejiri uwe elu mara mma, mgbe ị na-eme ntutu ma na- eme ihe n 'ntanye , na-enyocha ihe dị iche iche, ị nwere ike ịga na nnọkọ anụ ọkụkọ.
Mkparịta ụka ezinụlọ na picnic bụ ohere ọzọ iji jikọta azụmahịa na obi ụtọ. Ọ bụghị naanị na ị ga-enwe ike iji oge mara mma na-anụ ụdị na ikuku dị ọcha, ma ga-enwe ike icheta ụbọchị a ruo ọtụtụ afọ. Na onye na-ese foto ga-enyere gị aka ịmepụta ihe ndị ahụ n'ụzọ dị otú ahụ na oge foto ga-aghọ ihe njem na-akpali akpali ma na-adọrọ mmasị maka ma nwata ma okenye na-ekere òkè n'usoro ihe nkiri ahụ.
Ejiji Victor na akwa
Isi Art Nouveau
Ọ na-ekpuchi uwe aji
Kedu ihe ị ga-eji akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ?
Knitwear - ejiji ejiji maka ndị inyom n'oge niile
Uwe maka ballet
T-shirts na ederede maka di na nwunye
Ahịa na ụdị mmiri
Autoladies - anyị na-amụta ikpokọta mma na ụdị
Kedu otu esi eji akwa akwa akwa na-enweghị uwe?
Kedu ihe ị ga-eji akwa akwa akwa?
Egwuregwu Egwu maka Halloween
Ihe eji akpa ákwà na-ekwesịghị ịzọpụta
Ịghọta onwe onye
Michael Douglas natara ebubo nke iyi egwu mmekọahụ, ma jisiri ike ịgbagha ha n'ọdịnihu!
Mgbe ụkwara, ọ na-afụ ụfụ n'obi
Jerusalem atịchok - mgbe ị na-anakọta na otu esi echekwa owuwe ihe ubi?
Kedu esi kụtuo ọnọdụ okpomọkụ n'ime nwata?
Igwe catamaran inflatable
Enwere m ike ime ime onwe m?
Etucha steak - uzommeputa
Mmetụta dị iche iche bụ ụkpụrụ site na nwata
Na-eji ihe siri ike na-emegharị
Kedu ihe dị na banana?
Ngwurugwu carbohydrates bara uru
Nri sitere na osisi nwere aka aka
Kedu ihe mara mma iji na-akwa akwa akwa ahụ?
Esi mee ka nrọ buru eziokwu?
Salad salad na kukumba
Akpụkpọ ụkwụ wicker nke bast
Egwuregwu Nchekwa Onwe nke Nkịta
Efere eghe na anụ - echiche mbụ maka ịme achịcha dị mfe